Ogaden News Agency (ONA) – CWXO oo sii kordhiyay hawlgaladii uu la beegsanayay cadawga iyo hawaarintii oo baxsi hor leh bilawday
CWXO oo sii kordhiyay hawlgaladii uu la beegsanayay cadawga iyo hawaarintii oo baxsi hor leh bilawday
Wararka ugu dambeeyay ee naga soo gaadhaya Xarunta dhexe Jabahdda waxay sheegeen in dagaaladii ay naftood-hurayaasha CWXO kaga soo horjeedaan cadawga ay sii laban laabmeen, iyagoo ku qaadey weeraro balaadhan oy cadawga ku gaadhsiiyeen khaasre laxaad leh oo isugu jira naf iyo maal, gacantana kaga dhigay saanad milatari oo kala duwan, gawaadhi badan oo ah kuwa ciidamada qaadana laga gubay cadawga iyo wixii saarnaa.
Wararka kalee nagasoo gaadhay X/dhexe ayaa waxay intaa ku darayaan in maalmahan ay bilaabeen maleeshiyadii Hawaarintu baxsasho kadib markay xamali kari waayeen culayska kaga yimid CWXO iyo bulshada ay dhibaatada xoogan u gaysteen oo nacalad dusha kaga tuuray meeshii lagu arkaba.
Dagaalada aan helnay waxribixnadooda ayaa waxay u kalal dhaceen sidan;
27/9/2011 dagaal ka dhacay Dabanaag oo ka tirsan degmada Goday waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 1 askari 2ba kalana waa lagaga dhawaacay.
30/9/2011 dagaal culus oo gacmaha la’isula tagay oo ka dhacay Hoola oo ka tirsan deegaanka Araarso ee degmada dhagaxbuur waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 70 askari oo darajooyin kala duwan watay, halka dhaawacuna uu kor u dhaafayo 100 askari. Dagaalkan oo ahaa mid ciidamadan cadawga lagu weeraray goobahoodii ayaa waxa gacanta lagaga dhigay hubka nooca loo yaqaan boobayaasha culus iyo sanaad milatari oo kala jaad ah.
3/10/2011 dagaalo isugu jira mir, dhabagal iyo weerar oo ka dhacay deegaanada kala ah Dhanaan, Laab iyo wadada u dhaxaysa Gasaangas iyo Xamaro waxaa cadawga lagaga gubay hal gaadhi iyo wixii saraa waxaa kale oo lagaga dilay 8 askari iyadoo lagaga dhaawacay 8 kale.
4/10/2011 dagaalo ka kala dhacay deegaanada kala ah Dullasho oo ka tirsan deegaanka Baabili iyo Huusaale oo ka tirsan degmada Gari-go’an waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 5 askari waxaana lagaga dhaawacay 7 kale.
5/10/2011 dagaal dhabagal ah oo loo galay gadiid ciidamada cadawga deegaanka Dhargalay ee wadada isku xidha Dhagaxbuur iyo Dhagaxmadaw waxaa ciidamada cadawga lagag gubay halbaabuur iyo wxii saraa. Isla taariikhdan dagaal ka dhacay Sanxaskulle oo ka tirsan deegaanka Galaalshe waxaa cadawga lagaga dilay 1 sakri 3 kalana waa lagaga dhawaacay.
8/10/2011 wadada isku xidha Dhagaxle iyo Xaadaw dagaal dhabagal ah oo loo galay ciidamada cadawga waxaa halkaa lagaga gubay hal baabuur iyo wixii saraa.
Dhanka kale waxaa jira baxsi ay bilaabeen ciidamadii maleeshiaya ahaa ee Hwaarinta kuwaas oo qaar ka mid ah uu cadawga dib gacanta ugu dhigay oo la toogtay halka qaar kale ay ka baxeen dalka kuwana ay isu dhiibeen CWXO.
Raggan baxsaday oo qaar ka mid ah ay soo gaadheen magacyadoodu wariyaha nooga soo warama X/dhexe ayay tiradooda guud waxay gaadhaysaa 15 askari. Maleesiyaadkan ayaa ka kala baxsatay deeganada Xamaro, Dhagaxbuur, Garawo oo ka tirsan degamada Dhagaxbuur iyo Gabriile.
Ragga baxsaday ee la laayay markay soo qabteen ayaa waxa ka mid ahaa talihii maleeshiya ee degaanka Gabriile Axmed fadhan-fadh, Cabdi muxumed. Waxaa kale oo isna la toogtay gudoomiyihii degmada Gabriile Ibraahin Maxamed Cali. Nimankan waxaa toogtay ciidamada cadawga.
Sida caadada gumaysiga itoobiya ah mar walba oo uu kala kulmo gacan bir ah cwxo waxa uu dib ugu gadoodaa shacabka aan waxba galabsan kuwaasoo u gaysto dhibaatooyin kala duwan oo isgu jira xadhig, dhac, dil iyo jidh dil. Kuwii ugu danbeeyay ee helnay magacyadooda ayaan gadaal ka soo qori doonaa.